OnePlus 6T: qaababka qiimaha iyo fikradaha | Androidsis
OnePlus 6T horeyba waa rasmi oo kuwani waa astaamahiisa
Waxaan sugaynay Bilaabista rasmiga ah ee OnePlus 6T waana ugu dambeyntii halkan. Soo-saaraha Aasiya wuxuu soo bandhigay astaantiisa cusub ee u iman doonta inuu ku guuleysto Oneplus 6 oo leh qalab aad u la mid ah kii ka horreeyay laakiin leh qaar ka fiican oo isbeddel sameeya taasna ka dhigaysa terminalkan mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee la tixgelin karo
Horaan u ogaanay faahfaahinta badan Onelus 6T iyada oo loo marayo qulqulatooyinka kala duwan ee soo muuqday bilihii la soo dhaafay, laakiin hadda waxaan xaqiijin karnaa astaamaha farsamo ee terminalkan. Kuwa ugu xusida badan? Waxaa la xaqiijiyay in Shaashadda OnePlus 6T waxay yeelan doontaa akhristaha sawirka faraha oo isku dhafan.
1 Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan OnePlus 6T, ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
2 Astaamaha farsamada ee OnePlus 6T
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan OnePlus 6T, ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Marka la eego naqshadeynta qalabka, OnePlus wuxuu doortey dhammaystir bir ah oo qalabka siinaya qalab aad u sarreeya premium. Muuji qaanso ahaan qaab dhibic biyo ah oo kuyaala bartamaha shaashadda kaas oo maamulaya inuu aad uyar jajabiyo bilicsanaanta aaladda, taas oo ay iskaga egyihiin tii hore.
Waana in gadaasha OnePlus 6T ay dhab ahaan la mid tahay tan OnePlus 6, iyadoo farqiga kaliya uu yahay la'aanta akhristaha sawirka faraha ee hadda dhacaya in lagu dhex daro shaashadda. Dabcan, war xun oo loogu talagalay dadka ugu badan ee maqalka ah tan iyo OnePlus 6T ma laha jaakad 3.5mm ah markaa ma awoodi doonno inaan ku xirno headset fiilo leh.
Muuji badhanka xakamaynta mugga iyo furaha on / off ee ku yaal dhinaca midig si aad u bixiso ergonomics weyn. Dusha sare waxaan leenahay dusha sare ee siman halka hoose waa halka dekedda lacagtu ku taal. Nooca USB C terminal marka lagu daro soo saarida makarafoonka xarunta.
Guud ahaan waan aragnay taas Naqshadeynta OnePlus 6T wax badan iskama beddeleyso marka loo eego kii ka horreeyay. Caadi ahaan waxaan heysanaa qaanad sare oo shaashadda ah si markaa ay uhesho meesha ugu yar ee suurtogalka ah si aan loo jebin bilicsanaanta qalabka, inbadan oo xaddidan oo xaddidan si loo yareeyo cabbirka qalabka iyo la'aanta fare akhriska gadaal markii lagu dhex daro nidaamkan biometric shaashadda terminalka. Aynu ku aragno qaybta qalabka sida casriga ah ee la filayo u dhaqmayo.
Astaamaha farsamada ee OnePlus 6T
Ku sii wadida Tilmaamaha OnePlus 6T waxaad dhahdaa shaashadeeda waxay leedahay 6.41 inji oo ay la socoto teknolojiyadda AMOLED iyo qaab 19.5: 9 ah oo siinaya xal buuxa HD +. Tan waa inaan ku darnaa afhayeenka hore oo leh teknoolojiyadda Dolby Atmos oo runti balanqaadaya tayada codka oo wanaagsan. Mana ilaabi karno processor-kaaga Snapdragon 845 oo ay weheliso 6 ama 8 GB oo RAM ah iyo 128 ama 256 GB oo ah kaydinta gudaha ah, si ay u awoodaan inay dhaqaajiyaan ciyaar ama codsi kasta oo aan dhibaato lahayn.
Si aad u sheegto in qalabku leeyahay batari 3.700 mAh ah oo leh nidaam deg deg ah oo lacag bixin ah oo balan qaadaya inuu bixiyo batari aad u wanaagsan. Sida kamaradaha, waxaad dhahdaa OnePlus 6T, oo la yimaada lakabka caadiga ah OxygenOS oo ku saleysan Android 9.0 OreoWaxay leedahay laba kamaradood oo nidaam ah oo ka kooban muraayad 16 megapixel hore ah oo leh 1.7 aperture iyo mid labaad oo 20 megapixel lens ah oo leh isla aperture.
Kaamirada hore ee OnePlus 6T waxay lahaan doontaa 16 megapixels sidaa darteed waxay ka badnaan doontaa buuxinta baahiyaha isticmaale kasta oo doonaya inuu iska qaado sawiro ama wicitaan fiidiyoow oo leh tayo wanaagsan. Marka la eego taariikhda bilaabida iyo qiimaha OnePlus 6T, waxaa laga heli doonaa Spain laga bilaabo Nofeembar 6 qiimaha 549 euro oo loogu talagalay qaabka leh 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah, 579 euro oo ah nooca leh 8 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah iyo 629 euro oo ah qaabka ugu dhameystiran ee la yimaada 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd gudaha ah.
Qiimo runti dhexdhexaad ah oo leh astaamahan astaamahan leh oo ammaanaya OnePlus 6T sida mid ka mid ah xulashooyinka ugufiican ee laga fiirsado haddii aad raadineyso taleefanka gacanta ee ugu sarreeya ee Android wax ka yar 600 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus » OnePlus 6T horeyba waa rasmi oo kuwani waa astaamahiisa
AnTuTu waxay soo bandhigeysaa faahfaahinta muhiimka ah ee 'Honor Magic 2', oo ah dhamaadka sare ee xigta ee bilaabmaysa